Door Lock Screen အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.4 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（14.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Door Lock Screen - Fingerprint & 4K Wallpapers
အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်လှပသောတံခါးမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ခြင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးစမတ်ဖုန်း၏သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကိုတံခါးဖွင့်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူတီထွင်ဖန်တီးထားသောတံခါးဒီဇိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပါ။ AppLock သည်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအက်ပ်များကိုဖုံးကွယ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တရများကိုအလွယ်တကူကာကွယ်ပါ။ pin မပါ၊ ဤ app lock ကိုချိုးဖျက်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ တံခါးသော့ခတ်မျက်နှာပြင်သည်သင်အတွက်အလွန်သာလွန်ထူးကဲသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်သောသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ပေါင်းစပ်ထားသောစကားဝှက်လေးခုကိုသာသတ်မှတ်ပြီးသင့်စမတ်ဖုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုခံစားပါ။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောနောက်ခံတံခါးတံခါးသော့ခတ်မျက်နှာပြင် - Google Play စတိုးမှ AppLock ။ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုစကားဝှက်၊ ပုံစံဖြင့်ကာကွယ်ပါ။
countries နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင်နံပါတ် ၁ Door Lock Screen ။
countries နံပါတ် ၁ App Lock နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင် live wallpapers များ။
500 အသုံးပြုသူ ၅၀၀၀၀၀၀ ကျော်သည်ဤအေးမြသော Locker အက်ပလီကေးရှင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
တံခါးနှင့်သော့ခတ်ထားသော“ AppLock” ၏အင်္ဂါရပ်သစ်ကိုတင်ပြသည်။ AppLock သည် AppLocker သို့မဟုတ် App Protector တစ်ခုဖြစ်သည်။ App Lock တွင်ကျပန်းကီးဘုတ်နှင့်မမြင်ရသောသော့ခတ်ပုံစံစကရင်သည်အကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏မိုဘိုင်းဘက်ထရီကုန်ခန်းခြင်းကိုလျှော့ချပေးလိမ့်မည်။
Door lock screen - App Lock သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးသင့်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ တံခါးမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ခြင်းသည်သင်စက်အတွက်အံ့သြစရာကောင်းပြီးစတိုင်ကျလှပသောသော့ခတ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တံခါးမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ခြင်းသည်လက်တွေ့ကျသောအသံဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့်လွယ်ကူ။ လုံခြုံသောသော့ခတ် kabee ဖြစ်သည်။ တံခါးသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကသင့်ဖုန်းကိုထူးခြားကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ အခမဲ့လုံခြုံရေးနှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမလိုအပ်သောအကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးမျက်နှာပြင်အအေးခံသော Locker အက်ပ်။ တံခါးသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကို Android ဖုန်းတိုင်းနှင့်ဗားရှင်းတိုင်းအတွက်စစ်ဆေးသည်။ တက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများစတိုင်သစ်သားတံခါးသစ်သားမျက်နှာပြင်ကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။
★ SMS သတိပေးချက်
★သင်၏ပုံစံသော့ခတ်ခြင်းကိုစကားဝှက်တစ်ခုအနေဖြင့်ထားပါ။ ★အလွန်အသုံး ၀ င ်၍ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း★★ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိပါ br> ★သင်၏သော့ခတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ပါ။ ★★အကုန်အကျမရှိပါ။ ★အကောင်းဆုံးနှင့်အအေးခံသောလုံခြုံရေးသော့ခတ်မျက်နှာပြင်
သစ်သားတံခါးမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ခြင်းကိုဖန်သားပြင်မှ setting ကိုဖွင့်ပါ။ Pass Code ကိုသတ်မှတ်ပါ။ ပုံစံနှင့်မှတ်သားပါ။
ဘယ်လို AppLock ကိုသတ်မှတ်ခြင်း
App setting ထဲရှိ App Lock Tab ကိုနှိပ်ပါ။ ပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်စိတ်ချရမည့် App ကိုရွေးချယ်ပြီးသော့ခတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကိုပေးပါ အဖိုးတန် အကြံဥာဏ်များကိုရယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုးတက်မှုရှိစေရန်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့်အသုံး ၀ င်သည့်ကိရိယာကိုပေးနိုင်သည် သင်၏အကြံပြုချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သစ်သားတံခါးမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပါက App Lock .. !!
ဘာအသစ်လဲ Door Lock Screen - Fingerprint & 4K Wallpapers 2.0.7
How to Download Windows 10 Spotlight/Lock Screen Images or wallpaper
Data Analysis GC/GCMS/LCMS/HPLC
PUNCH HOLE AND NOTCH WALLPAPER 200+ FREE AMAZING WALLPAPER'S BEST OF 2020